အသက် ( ၁၃ ) နှစ်နဲ့ ကိုယ်ဝန် ( ၅ ) လရှိခဲ့တဲ့ ( ၇ ) တန်းကျောင်းသူလေး ( မိုက်လိုက်တာသမီးလေးရယ် ) – အနုပညာရပ်ဝန်း
မနေ့ကကျမဆေးခန်းကို ultrasound ကြည့်ဖို့သားအမိနှစ်ယောက်လာပါတယ် သူတို့သားအမိဝင်လာတုန်းကတော့ ရင်သားတဖက်မရှိတဲ့မိခင်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်း လူနာလို့ထင်မိတာပါ။ နောက်တော့မှကျမသမီးလေးရာသီမလာတာ3လလောက်ရှိပြီ ဗိုက်မှာလည်းအလုံးပေါ်နေလို့ဆိုမှ ကလေးဗိုက်ကိုစပ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့ ဗိုက်ထဲမှာကိုယ်ဝန်က5လပြည့်ခါနီးပါပြီ။
ကလေးရဲ့အသက်ကိုသေချာသိချင်လို့ မွေးနေ့မေးလိုက်မှ 13နှစ်နဲ့ တစ်လဗိုက်ထဲကကိုယ်ဝန်က 5လ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အမွှေးတောင်သေချာမပေါက်သေးတဲ့မျက်နှာ အေးအေးလေးနဲ့ကလေးကိုကြည့်ပြီး ကျမဘယ်ကနေစပြောရမလည်းတောင်တွေးမရတော့ပါ မတတ်နိုင်အမေကိုရှင်းပြတော့ပြီး သမီးရည်းစားရှိသလားချော့မေးတော့ ရည်းစားတော့မရှိအပျိုမဟုတ်တဲ့အဆောင်နေသူငယ်ချင်းဆီက ဘောင်းဘီယူဝတ်မိသည်ဟုပြောသည်။
လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး အမှန်အတိုင်းပြောဖို့နည်းနည်းလေးမာန်လိုက်တော့မှ တတန်းထဲနေသူငယ်ချင်းနှင့်ဟုဝန်ခံလာလေသည်။ fb ပေါ်မှာဟိုတလောကေ ခတ်စားနေတဲ့ရေကူးကန်ထဲကိုယ်ဝန်ခုနှစ်ယောက်ရတဲ့မဟုတ်တဲ့ post ကိုဖတ်ပြီးအမေကိုဘောင်းဘီကိစ္စနှင့်ဖြီးတော့ အူကြောင်ကြောင်အမေကသို့လောသို့လောဖြစ်သည်…။
ဒီအမေနှင့်လွှတ်ထားလို့မပြီး ငါဝင်ပါမှဖြစ်မည်ဆိုပြီး ဆက်မေးမှကျမဖင်ထိုင်ရက်ကျမတတ် တတန်းတည်းကျောင်းသားသူငယ်ချင်းအချင်းချင်း အဆင့်လောက်တွေနှင့်အတူနေကြသည်တဲ့ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းရဲ့ညဖက်စာကြည့်ချိန်တွေမှာ ညဖက်အတန်းလွတ်တွေထဲသွားကြသော အဲသလိုကလေးတွေတော်တော်များနေပုံရသည်။
သူပြောတဲ့ဘောင်းဘီယူဝတ်တဲ့သူငယ်ချင်းကလည်း ရည်းစားမဟုတ်ပဲအတူနေကြသည်တဲ့ .ေနာက်တတွဲကတော့ရည်းစားပေါ့7တန်းတွေနော်တခန်းထဲအတူတူချိန်းနေကြသည်တဲ့ 3တွဲကဲကလေးမို့တခါတလေမှား သလားလို့ကြိမ်ရေမေးတော့ ကြိမ်ရေမနည်းတော့ပါ။
သမီးတို့အတနြးကအဲသလို ကှိုကြ ကှတာနညြးတယြ 9တနြး 10တနြးဆိုပိုခှိနြးတှေ့ကှတာလို့ပှောတော့ ကမှ ပကလြကလြနြ ကခွငွလြာသညြ…မီတာခမွားလို့ ညဖကကြှောငြးအပေါထြပတြှေ မီးပိတထြားတော့ ဘိတှဖှဈေကုနကြှပှီထငြ… .ဒါတောငြ…ကလေးကသှကလြကခြကြှခွာပုံ.သိပမြပေါဘြောဒြါဆောငကြှေးကလညြး..မနညြးပါ.တောရြုံမိဘ မထားနိုငတြဲ့အနအထေားပါ.. .ဘောဒြါနှငြ့ ကိုယပြိုငကြှောငြးတှဲ ဖှငြ့ထားပါသညြ. သးသွေးခာခွာနရောလညြးမဟုတပြါ
ဒီကိစျစမှိုးက…ကမွမှ ဖှငြ့မပှောလငြွ. .ကိုယြ့ကလေးအတှငြးရေးမို့ ဖုနြးဖိရငြး.. အခှားမိဘ..သတိမထားမိဖှဈနမှောရော သားမှေးထားသူတှရေော…သမီးမှေးထားသူတှရေောကှောငြးထောငထြားကှသော..သူငယခြငြွး တှရေောကို သတငြးပေး ခငွရြွရြေးပါသညြ…လူနာကို ငဲ့ညာသောအားဖှငြ.အမေးအဖွှမေားကို.လှော့ရွရြေးပါသောလြညြး.ညနေ ဆေးခနြးက..အပှနမြှာ.ကမှ မလှုပနြိုငအြောငပြငြ.ကှောကစြရာ..အဖွှမေားရခဲ့ပါသညမြိဘမွား..ဆရာမွား.. ခတကြို..သတိထားကှပါ ညဘကစြာကကွဝြိုငြးမွားကို..သတိထားကှပါ စာသငကြွောငြး..စာသငခြနြးမွားကိုလညြး.. .သတိထားကှပါလို့…..သတိပေးပါရစေ